Akụkọ - hookah mmanya kachasị ewu ewu na ndụmọdụ ngwa
Na mgbakwunye na hookah nke ekwuru n'isiokwu gara aga, ebe a, m ga-akwado ụfọdụ ngwa metụtara hookah dabara maka ire mmanya.
Wayzọ a bụ dakọtara hookahs iko nkịtị na mgbaaka ọkụ ọkụ LED ma ọ bụ ntọala, (dị ka egosiri n'okpuru). Uru nke usoro a bụ ịdị mma na mgbanwe. Ị nwere ike iji ọkụ ndị a kwekọọ n'ụdị hookah ọ bụla masịrị gị, enwere ike iji ọkụ ahụ. Gbanwee agba ọ bụla masịrị gị iji mepụta ikuku dị ebube. M ga -ewebata ngwaahịa ndị a n'ụzọ zuru ezu n'isiokwu a.
Nke a bụ ihe ndu zuru ụwa ọnụ nke ejiri ihe acrylic mee, nke a na -etinyekarị n'okpuru iko iko hookah. Ị nwere ike ịtọ ya ka ọ gbapụta ọkụ nke ịchọrọ, hookah ahụ ga -ama mma ozugbo. N'ụzọ bụ isi, iko hookahs niile nwere ike iji ya. Uru ya bụ na ọ bụ mkpagharị, adaba iji dochie batrị, yana nwee ọtụtụ ngwa.
Nke a bụ mgbanaka ọkụ ọkụ LED, nke a na -akwụdo n'okpuru trakị hookah. A na -enwekarị ụzọ abụọ iji kwụba ya. Ụzọ nke mbụ bụ iji ndọta adọta. Ọ na -abịa na ndọta abụọ, nke nwere ike ịdọrọ ndọta nke efere. Usoro nke abụọ bụ iji teepu nwere akụkụ abụọ wee rapara ya na efere ahụ. Enwere ike ijigharị teepu a ma dịkwa mfe iji.
3.Cubes Ice na-amịkọrọ mmiri
A na -ejikarị ya ememme dị iche iche ma ọ bụ ụlọ oriri na nkwari akụ na ebe ndị ọzọ, ị nwere ike jikọta ya na hookah, na -emepụta ikuku ihunanya dị nro na nke mara mma.
Oge ezipụ: Aug-25-2021